Wafdigii shalay gaaray Kismaayo oo maalintii labaad kulamo la leh waxgaradka deegaanka. – Radio Daljir
Wafdigii shalay gaaray Kismaayo oo maalintii labaad kulamo la leh waxgaradka deegaanka.
Diseembar 28, 2012 5:56 b 0
Kismaayo, Dec, 28- Waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda hoose ka dhacay kulan dhex maray wafdi shalay soo gaaray iyo waxgaradka deegaanka kaasoo noqonaya kulankii labaad.
Shirarkan oo isugu jira kuwo guud iyo gooni-gooni ayaa socday tan iyo markii magaaladaasi ay gaareen wafdigii ka socday DF ee Soomaaliya.
Waxgaradka deegaanka ayaa xubnahaasi kala hadlay sidii loo dhameystiri lahaa howlgallada gobollada Jubooyinka lagaga saarayo xooggaga Al-Shabaab iyo qorshayaasha ku aadan maamul yagleelidda gobolada Gedo iyo Jubbooyinka.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya? C/kariin Xuseen Guuleed oo shirarkaasi isdaba jooggaa mid ka mida ka hadlay ayaa sheegay in waxgaradka deegaanadaasi ku nool looga baahan yahay iney ka qeyb qaataan amniga iyo hormarka dalkooda gaar ahaan deegaanada ay ku dhaqan yihiin isla mar ahaantaana dawladdu ay diyaar u tahay iney ka hirgeliso gobollada Gedo iyo Jubbooyinka barnaamijyo hormarineed.
Wafdiga ayaa maanta Kormeer dhawr goobood oo kaabayaasha bulshadaa sida dekadda iyo cisbitaalka.
Shirkadd ganacsi oo xarun ka furatay Gaalkacyo, (Sawirro)